I-PA03 - I-OMG 120dB Sound Grenade, i-Alarm Personal Safety Shrill Alarm Yabesifazane, Izingane, Abadala - $ 49 - OMG Solutions
I-PA03 - I-OMG 120dB Sound Grenade, i-Alarm Personal Safety Shrill Alarm Yabesifazane, Izingane, Abadala - $ 49
Khulume: I-120 db. i-siren
Compact: 2.79 X 1.22 X intshi engu-0.51 kuphela ne-TSA evunyelwe
Isisindo esincane: ngaphansi kuka-1 ounce (20g)
Ukusetshenziswa okuningi: Phinda ufake iphini futhi usebenzise futhi
Isikhathi eside sokuphila: I-30 imizuzu yokusebenzisa i-alamu yenani eliphelele
Sizalelwa abahloli bamazwe. I-eAlarm isisiza ukuba sihlole ngokuzethemba. Kuyinto i-alamu ye-ultra-compact yomuntu siqu, isayizi encane kodwa enkulu enomsindo. Uma ususa iphinikhodi, le alamu yomuntu siqu iveza i-120 decibel (i-ambulensi-level) alamu. I-siren izozwakala ngokuqhubekayo kumaminithi we-30 ngaphandle kokuthi iphini libuyiselwe kudivayisi. KUHLANGANISIWE: Ibhethri ne-Metal Carabiner. Njengoba kubonwe ku-NBC, lokhu kuyi-EAlarm yokuqala. Qaphela ukulingiswa okuphansi kwekhwalithi.
“Indodana yami ifunda ekolishi kanti izolo ebusuku njengoba ibiya emotweni yayo ibone indoda imlandela. Uqaphele lapho ewela umgwaqo kanjalo nale ndoda ebimlandela ngakho-ke idonse i-alamu yakhe. Le ndoda iqale ukugijima kanti ezokuphepha zasesikhungweni seza ukuzobona ukuthi kwenzekani. ” - URAYLENE
“Ngiphume esitimeleni ngo ~ 11PM kwathi lapho ngiqonde emotweni yami (ngangicishe ngamamitha ayi-100 ukusuka emotweni yami), kwaqhamuka amadoda amabili eza kimi acela imali yami athi aphethe isibhamu. Ngivele ngidonse i-alamu babaleke !!!! Angikholwa !! Bengingalindele ukuthi ngiyisebenzise lapho ngiqala ukuyithola kodwa manje sengizo-oda eyodwa noma ezimbili ngaphezulu njengesipele !!! Nina bafana niyamangalisa! Ngiyabonga kakhulu, Becky ”
Vele uthathe i-Pin ukuze usebenze.
Iza ne-carabiner yangaphambili efakwe (hook hook) ukuze ukwazi ukunamathisela ku-keychain noma kwesikhwama ngokukhululeka okukhulu.
Ukubekezela kokushisa okuphansi
Ungathatha i-alamu yakho ephathekayo emakhazeni angaphandle, lapho ungayidinga kakhulu. Uhlobo Lokushisa Lokusebenza: -10 * C kuya ku-40 * C noma i-14 * F kuya ku-104 * F
2.8 x 1.2 x amasentimitha angu-0.5
Ukubuka okuphelele kwe-3665 Ukubuka kwe-1 Namuhla